करार सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई बिदा ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > करार सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई बिदा !
करार सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई बिदा !
कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रतिष्ठानले १६ महिनादेखि मेडिकल वार्डमा कार्यरत घोराही १५ का स्टाफ नर्स डिसीलाई करार सेवाको म्याद थप गरेन । यसअघि प्रतिष्ठानमा कार्यरत आफूलाई पनि यही वैशाख १ गतेदेखि कममा नआउनू भन्ने व्यहोराको पत्र थमाएको चिकित्सक डा. अमृता श्रेष्ठले गुनासो गरिन् ।
स्वास्थ्यकर्मीको म्याद नथपेको विषयलाई प्रतिष्ठानले नियमित प्रक्रिया भएको जनाएको छ । प्रतिष्ठानका कामु रजिष्ट्रार कैलाश देवले म्याद सकिएकाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अवकाश दिइएको जानकारी दिए ।
‘करार सकिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा रोकेका हौंँ, सरकारले कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई बिदा नदिने भनेको हो, म्याद सकिएका कर्मचारीलाई काममा लगाउनेबारे भनेको होइन’, रजिष्ट्रार देवले भने ।
कामु रजिष्ट्रार देवका अनुसार केही स्वास्थ्यकर्मी आफैले राजीनामा दिएका छन् भने केहीको म्याद थप गरिएन । ‘कुनै पनि संस्थाले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका कर्मचारीलाई कसरी राख्न सक्छ र ? सोहीबमोजिम उहाँहरुलाई पत्र थमाइएको हो’, कामु रजिष्टार देवले भने ।
२०७७ वैशाख ११ गते ०८:०३ मा प्रकाशित
राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता (सहमति पत्रसहित)
छक्का पन्जाले हात पार्यो उत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड,अरु कसले के पाए ?
दोस्रो घण्टामा : नेप्से १६२४.१० विन्दुमा, ग्लोबल आइएमई र एनएमबि बैंकको सर्वाधिक कारोबार